4 Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Oku-Trip Essentials EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 4 Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Oku-Trip Essentials EYurophu
Enye yezinto ezijabulisa kakhulu mayelana e-Europe ukuthi ungathola khona ngesitimela yonke indawo. Kuyinto kusho okwandile iningi ezokuthutha futhi ozithandayo abantu abaningi ukuba ukuhamba nezwekazi. Abantu kubuta imibuto nangaphambi kokuba inqume ukuba sithathe isitimela, pre-uhambo essentials ezifana Ngingayithathaphi ukuthenga amathikithi? Ngisihlola kanjani ihlela? Nginga ukuwela kusuka kwelinye izwe? Yini izi izitimela ebusuku efana?
Nazi izinto ezibalulekile pre-uhambo une ukwazi:
Emashejuli kanye Amanani Izitimela European
Nakuba wonke kulo lonke elaseYurophu ixhunyaniswe ngumuntu Inethiwekhi ebanzi kakhulu isitimela izwe ngalinye inkampani ujantshi kanye, Ngakho-ke, kuwebhusayithi yayo nge amasheduli futhi amanani. Uma ufuna ngihambe ngesitimela ngaphakathi ezweni elifanayo, ngaphandle ukweqa yimuphi umngcele, namanje Kunconywa uya ngqo Londoloza Isitimela njengoba ayezokwenza izindiza eziya Skyscanner. Uma ungazi ukuthi iyini, -Google uzokunika impendulo. Cishe wonke amawebhusayithi Unenguqulo IsiZulu, ngakho-ke kulula ukuyisebenzisa futhi uhlole amasheduli. Uma ufuna ngihambe ngesitimela kusuka kwelinye izwe elilodwa (njalo ngaphakathi Europe) nawe kufanele ukucinga umzila i lokusebenza efana Londoloza Isitimela.
Kanjani futhi nini Thenga ithikithi?
Omunye okusemqoka pre-uhambo nakanjani amathikithi. Ezinye izindima isitimela (ikakhulu labo abaseminyakeni yokuthola ijubane eliphezulu futhi lezo ukuxhuma izihloko noma emadolobheni amakhulu) bavame yenyuka intengo lapho usuku ukuhamba izindlela; kukhona abanye (izitimela wendawo nalabo axhunywe nemizi eseduze) ukuthi ngaso sonke isikhathi ukugcina amanani efanayo. Uma ojikelezayo kusuka capital inhlokodolobha, kungcono ukuthenga ithikithi emasontweni ambalwa ngaphambili ukuze uthole intengo engcono. Uma ukuthenga amathikithi ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza (abaningi izinkampani isitimela European babe lokusebenza yabo kakhulu), uzothola i ithikithi electronic ngekhodi QR ungabonisa umshayeli kusukela isihenqo ifoni yakho, ngakho akudingeki ukuba uzitholele kubo.
London Lille Izitimela
London eBordeaux Izitimela
Into enhle mayelana ehamba ngesitimela wukuthi iziteshi ngokuvamile maphakathi imizi futhi kalula nge-metro, ibhasi noma ngezinyawo. Awunayo ukuhamba ihora ukuya esikhumulweni sezindiza (ngaphandle kokuthi uku phezu emaphethelweni omuzi, nakuba ngokuvamile akwenzeki kuthatha isikhathi eside kangaka). Uma u ukuhamba imithwalo kancane, ungaya ngu ezokuthutha zomphakathi. Uma ezithwele kakhulu, mhlawumbe itekisi ukhetho best. Akukona ubuhlungu ukusho: kukhona imizi babe zezitimela eziningana (Ngokwesibonelo, Paris) ngakho qiniseka ngalokho isitimela yakho isuka njalo. Ngezinye izikhathi kungase kwenzeke ukuthi kufanele uthumele kusuka kwelinye esiteshini kwesinye.
Isikhathi of Izitimela eYurophu
izitimela European suka ngomzuzu ngqo (ngaphandle kukhona ukubambezeleka kwabanye isizathu zezulu). Ukuthola esiteshini mayelana 15-20 imizuzu ngaphambi kuhlale omunye okusemqoka pre-uhambo. Khumbula ukuthi kukhona izitimela ukuthi made kakhulu futhi ngezinye izikhathi kuyodingeka bahambe okuningi ukuya ekupheleni platform. Usuthule phakathi komunye umuzi nomunye musa ivame ngaphezu kwamaminithi ambalwa.
Lokhu kwaba umhlahlandlela encane kodwa eziwusizo ku pre-uhambo okusemqoka mayelana uhambo isitimela e-Europe kanye izinto une ukwazi ngaphambi kokunquma ukuthatha omunye. Sithemba ukuthi nakho uzuza iyoba usizo kakhulu lapho.
Faka Londoloza-A-zemininingwane ukubhuka ithikithi lakho Isitimela iyiphi yendawo 3 amaminithi, sikhathi eshibhe athenge amathikithi esitimela ngemali engako, futhi ethathelwa izimali yokubhuka obnoxious!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-pre-trip-essentials-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#umthwalo #packing europeantravel Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela